မနေနိုင်တော့ဘူးကွယ် – မြန်မာသတင်းစုံ
Posted on March 4, 2021 Author admin	Comments Off on မနေနိုင်တော့ဘူးကွယ်
အကြောင်းတိုက်ဆိုင်လာပြန်တော့ ငယ်ငယ်ကအကြောင်းတွေသတိရမိသည်။ အဲ့တုန်းက သူက ၂၁ ဝန်းကျင်လောက်၊ မိဘတွေပြသနာ ဖြစ်တာကြောင့်ရော မိဘနဲ့အတူမနေရတာကြောင့်ပါ ဆိုးလို့ရမျှ ဆိုးနေတဲ့အချိန်၊ ဆေး၊ အရက် ၊ဆက် အကုန်လုပ်သည်။ အပေါင်းအသင်းတွေထဲမှာ အကောင်ကြီးကြီးသားသမီးတွေပါတယ်ဆိုတော့ လုံခြုံတာလဲပါသည်။ ပေါင်းတဲ့အပေါင်းအသင်းတွေကလဲဒီထဲကလူတွေ၊ ထားတဲ့ဆော်ကအစ။ အဲ့တုန်းက သူတို့ကိုပစ္စည်းပစ်နေတာ ကိုသီဟနှင့် မဒါလီတို့လင်မယား၊ အတွဲကိုယ်စီဖြင့် ဟော်တယ်တကာ သွားဆွဲကြ ပါတီတွေလုပ်ကြဖြစ်သည်။ မဒါလီအဖေက မူးယစ်က ဘာကောင်ဆိုလားပဲ သူ့ဆီမှာ မရတဲ့အချိ်န်မရှိ၊ ထုတ်တဲ့စက်ရုံပိတ်ထားရင်တောင် သူ့အဖေဖမ်းထားတာတွေနဲ့ တစ်နှစ်လောက်ပစ်လို့ရသည်ဆိုပဲ။ ကိုသီဟကတော့ ဖက်ရှင်ဆိုင်ဖွင့်ထားသည်၊ တစ်လတစ်ခါ နှစ်လတစ်ခါလောက်တော့ ဘန်ကောက်၊ စင်ကာပူဈေးထွက်ဝယ်ရသည်။ အခုလိုအွန်လိုင်းကမှာလို့သိပ်အဆင်မပြေသေး။ အလုပ်မရှိ ဖြုန်းအားကောင်းသည့် သူရဇော်တို့အုပ်ဖြင့်တော့ အတော်တွဲမိကြသည်။ သူရကတော့ တစ်ခါမှာလျှင် သူ့ဆော်ဧပရယ်အတွက်ရော နှစ်ယောက်စာ ၁၀၀လောက်မှာရသည်၊ မဒါလီပြောတာတော့ သူမောင်လေးနှင့်တူသည်ဆိုကာ သူရဇော်မှာလျှင် […]
သျှင်သွေး သူငယ်ချင်း ဖြစ်သူ ထံ မှ ဖုန်း ဖြင့် ကူးယူ ထားသော အပြာကားများ ကို နားကျပ် တပ်ကာ ဆေးလိပ်ဖွာ ရင်း ကြည့်ရန် ဆုံးဖြတ်ကာ အိမ် ခန်းဆီး ကို မှီပြီး ထိုင်လိုက်သည် ။ မိန်းမ ဖြစ်သူ အိတုံ က တော့ အခန်း ထဲ တွင် အိပ်မောကျ နေလေသည် ။ နွေ ရာသီ မို့အိုက်စပ်စပ် ဖြစ်နေသည် ။ သျှင်သွေး အပြာကား များကို စတင် ကြည့်ရှု နေရင်း ဇာတ်ဝင် ခန်း တစ်ချို့ ကြောင့် အမည်မသိ သော ခံစားမှု များ […]
မဖြစ်နိုင်ဘူး ဒါ လုံးဝမဖြစ်နိုင်ဘူး …. အတွေးနှင့် ခါးခါးသီးသီးငြင်းဆန်ရင်း ခေါင်းကိုခါရမ်းပစ်မိတော့ တားဆီးချိန်မရလိုက်တဲ့မျက်ရည်တွေက ဟိုတစ်စ ဒီတစ်စ လွင့်စင်ကုန်ကြသည် သူငယ်ချင်းတွေ လာလာသတိပေးခဲ့ ပြောခဲ့ကြပေမယ့် ယုံကြည်လို့မရခဲ့ အခု မိမိမျက်လုံးနဲ့ တပ်အပ်မြင်နေသည့်တိုင်အောင် ချစ်မိတဲ့နှလုံးသားက အမှန်ကိုလက်ခံဖို့ ခက်ခဲနေသည်…။ ကိုကိုနဲ့ချစ်သူဖြစ်တာ နောက်တစ်ပက်ဆိုရင်ပဲ တစ်နှစ်ပြည့်ခဲ့ပြီ အစစအရာရာ အနွံတာခံလွန်းသော အရာရာ အလျော့ပေး ချစ်တတ်လွန်းသော မိမိဆန္ဒကို အလေးအနက်ထားက လိုက်လျောပေးတတ်သောကိုကို့ကို အတိုင်းအဆမဲ့စွာချစ်မိရင်း ယုံကြည်အားကိုးသည့်စိတ်က အခိုင်အမာကပ်တွယ်လာခဲ့တာ ကိုကိုမသိ…. တကယ်တော့ မှူးသခင်ဆိုတာ အချစ်ကို ရေလိုသဘောထားသည့် မိန်းမစားမျိုးမှမဟုတ်တာ ကိုကို့အချစ်ကို လက်ခံဖို့တောင် တစ်နှစ်ခွဲကျော်အချိန်ယူလေ့လာပြီးမှ ကိုကိုလိုချင်သည့်အဖြေကို ပေးခဲ့တာပါ….။ ချစ်သူဖြစ်ပြီးနောက်မှာလည်း ချစ်သူတို့သဘာဝ ပွေ့ဖက် နမ်းရှုံ့တာလေးတွေရှိခဲ့ပေမယ့် စည်းအကျော်မခံခဲ့… မိမိအပျိုစင်ကို အချိန်မတန်ပဲ မပေးချင်သလို တန်ဘိုးမဲ့သွားမှာလည်း […]